Aher Shelf Corpor Nevada Imininingwane ne-Inventory
Ungakhetha noma yiziphi izinkampani zethu zeNevada Aged Corporations nezinkampani zeNevada Shelf. Uzothola amaShelf Corporations, ama-Aged LLC nezinhlelo zokuthuthukisa izikweletu ezingangezwa enkampanini yakho. INevada inikeza izinzuzo eziningi, ukufunda kabanzi ngayo Ukufaka ngaphakathi eNevada, ungafunda ngezinzuzo zentela yeNevada, imithetho evumayo yebhizinisi, izinhlobo zesitoko ezingakhishwa ngokuzayo futhi nokufaka imininingwane eminingi.
Izinzuzo Zabantu Abadala be-Nevada Shelf Corporation
Ungaqala ukuzuza ngokushesha ngokuba nebhizinisi lakho leNevada ngokukhetha ukuthenga ibhizinisi elivele lifakiwe, noma a Aged Nevada Shelf Corporation.
Izinkampani ezindala zaseNevada zinikela ngezinzuzo ezifanayo kakhulu kunhlangano yeNevada nokuningi. Kokubili akukhokhiswa intela yombuso, banemithetho eqinile yokuvikela impahla nobumfihlo bobunikazi. (Igama elithi "ishelufu" lisho ukuthi inkampani yasungulwa ngaphambi kosuku lokuthenga futhi ngokujwayelekile ibihleli eshalofini ilinde iklayenti elidinga inkampani endala.)
Izinzuzo Ezengeziwe Zenkampani Nevada Shelf Company
Abanikazi benkampani esegugile eNevada akuyona into egcinwe emphakathini.
Ubumfihlo - INevada ayabelani ngemininingwane yenhlangano ne-Internal Revenue Service (IRS). Njengoba beyindawo engenayo intela engenayo imali, abaqoqi lolo lwazi ukuze bahlanganyele. (Ngokwemvelo, sincoma ukuhambisana ngokuphelele neziphathimandla zentela.)
Ukuvikelwa Kwempahla - YiNevada kuphela (njengalokhu kubhalwa) evikela abaninimasheya abalahlekelwa amasheya abo lapho bemangalelwa uqobo.
Ukwenza Okusheshayo Nokulethwa - INevada Corporation ebhalwe kahle ingafayiliswa ngokushesha okukhulu. Inkampani endala eNevada ingalethwa ngokushesha.
Imali ekhokhwayo yokuvuselela yonyaka ophansi - Ukuvuselelwa kwaminyaka yonke okubandakanya ukufakwa ohlwini lwabaphathi nabaqondisi kuyi- $ 125 kuphela ngonyaka kumakhasimende amaningi njengalokhu kubhalwa.
Khethisa Abanye Abaphathi Nabaqondisi - Abanini bamasheya balawula inkampani. Ngakho-ke, ungalawula inkampani yakho bese igama lakho lingaveli kumarekhodi omphakathi ngokuqoka abaphathi beqembu lesithathu nabaqondisi abavumayo ukukuma kumarekhodi omphakathi. Kukhona osaziwayo nabanye, okuthi yize behambisana ngokuphelele, bamane bakhethe ubumfihlo bezezimali nokungaziwa. Futhi, lokhu kuzosetshenziswa kuphela ngokomthetho, ngokuziphatha okuhle.
Izinkampani ezinenzuzo zihlukaniswa yi-IRS inkampani engu- “C” noma i- “S”. Ngokuvamile inkampani ethi “C” ikhokhiswa intela ngokuhlukile kubaninimasheya kanti ngenhlangano eyi- “S” abaninimasheya banesibopho sentela kuzinzuzo zebhizinisi.
Izimali zikahulumeni zohlu lwaminyaka yonke lwamaphoyisa nabaqondisi eNevada njengamanje yi- $ 125.
Dlulisa amehlo ku-Aged Corporations ku-Nevada Inventory